Almost 150 euros dhisikaundi pane iyi MacBook Air ine M1 | Ndinobva mac
Kuuya kweMacs matsva neM1 processor kuri kugadzira mitengo yezvigadzirwa izvi inodonha zvakanyanya Uye kana iwe ukawana kupihwa kwakanaka senge iyo yatiri kuzogovana mune ino chinyorwa, iyo mari inogona kunyatso kunzwisisika.
Uye isu tiri kutaura nezvazvo ingangoita € 150 dhisikaundi pane MacBook Air ine M1 processor yakavhurwa yapfuura Mbudzi 2020. Zvine musoro, ichi chinopihwa chinogona kuwanikwa chete pane mawebhusaiti akadai seAmazon.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vanga vachizeza kutenga Mac nyowani ine M1 processor, ikozvino unogona kunge uri mukana wako. Aya makomputa matsva anomiririra kukwakuka kukuru maererano nesimba, mashandiro uye pamusoro pemutengo wese uchienzaniswa neApple makomputa akawedzera ma processor eIntel.
Iyi nyowani Mhepo inowedzera yekutanga chip yakagadzirirwa zvakananga iyo Mac neApple. M1 yeApple system pane chip (SoC) inosunga mabhiriyoni gumi nematanhatu transistors uye inosanganisa iyo CPU, GPU, Neural Injini, I / O uye zvimwe zvakawanda mudiki dhizaini. Nemaitiro epamusoro, matekinoroji e bespoke uye kugona kwepamusoro muindasitiri, iyo M16.000 haisi danho nyowani reMac.
Mutengo wevashandisi veAmazon Prime pamwe nekutakura imba inosanganisirwa anongova 985,99 euros. Uyu hapana mubvunzo mutengo wakanakisa waunogona kuwana nhasi pakutenga kweMacBook Air ine processor yeM1. Iyi MacBook Air ndiyo modhi 13 inch ine 8 GB RAM uye mune ino kesi iri 256 GB SSD modhi muvara gspace ris.
Uye zvakare, iyo garandi inonzwisisika yakapihwa neAmazon, saka isu takatarisana neimwe yesarudzo dzakanakisa dzekutenga michina iyi nhasi, zvese mumutengo, semabhenefiti, pamwe neiyo garandi kufukidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » Almost 150 euros dhisikaundi pane iyi MacBook Air ine M1